Nzira Gowns, kuvhiya Pack, kuvhiya Drape - Akso
Nzira Pack & Drape
Mother & Kids Cares
Abdominal Sungira For Pregnant Women
Baby anoposhwa nechifuramabwe inoti
Nhungamiro namira tepi kubva 3M.
Advanced zvinhu pamwe Anti-kunofambira mberi, isapinda kana hydrophilic & Low anopinza ehupfumi.
Soft uye Comfort kugona.
Easy traceability yenhengo zvose rongedza.
Zvinopa Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri kuchengeteka uye chirwere masimba panguva zvose maoparesheni.
Made yepamusoro SMMS.
Anosangana AAMI 3 Liquid Chipingamupinyi Standard zvinodiwa kuti zvomusejari gowns.
Anosangana mureza chokupika BS EN 13795.
Anosangana mutemo Flammability pamusoro Clothing Textiles CPSC16, Zvinokonzerwa 1, CFR Part 1610.
Low anopinza uye abrasion nemishonga: kunoderedza ngozi amabwe anopinza kusvibiswa iri ronda.
Adjustable neckline pamwe tichisunga dzvuku mitsipa - haka uye loop.
TAKACHENA AND WOKUNYARADZA
Taped musono zvinoreva zvakazara chisimbiso seam- pamusoro mvura uye guruva ingress.
Permeation akaedzwa pamusoro inokosha zvakawanda makemikari.
Co-extruded jira chiedza, nyoro uye tigone kushanduka painoperera.
Fully elasticated Hood, zviziso zvemakumbo uye pamaoko inopa maximize nyaradzo uye kudzivirirwa.
EN1073-2 kudzivirira seguruva kuti anogona kwakasvibiswa radiations.
EN14126 kudzivirira utachiona ngozi uye infective nevamiririri.
Approved maererano EN1149 Anti-kunofambira mberi mureza.
Vachitsvaka yepamusoro akanakisisa
Alice, muvambi Akso zveutano, aiva sekuru aiva Chinese chiremba akakurumbira. Akanga abatsirawo vanhu vakawanda ake nounyanzvi zvokurapa. Kubva achiri muduku, Alice akadzidza sekuru vake kuti basa wezvokurapa runotsungirira hapana hanya.
Alice akapinda zvokurapa indasitiri pashure achikura, uye akawana Akso zveutano. Zvakaoma, njodzi, dzakachena uye nyaradzo kunge muchiridzira zvose zvaro basa. Ndiwo kutsvaka Alice uye chikwata chake. Kubva design, kusarudza mbishi zvinhu ...
Akso zveutano unyanzvi mune zvokurapa disposables, unodzivirira nguvo, uye nonwoven kuraswa zvigadzirwa, zvakadai zvomusejari draps, gowns, kuvhiya packs it, kuraswa coverall, voga gown, kumeso, shangu pakavha etc.
Ovi kuvhiya GOWN
Ovi kuvhiya GOWN Hwakavimbika PER ...
MIRAI kuvhiya GOWN
MIRAI kuvhiya GOWN Hwakavimbika Performance ...
Cleaing Disposable Lab majasi Multilayer Spunbon ...
Disposable yezvirwere jasi rinoshandiswa chaizvo laborato ...
Disposable Kusurukirwa Gown Size Universal Qty 50 ...
kuzviparadzanisa nevamwe vedu gowns dzinoitwa pamatunhu -...
Safe, zvakachena uye kunyaradzwa, izvi hunhu wedu zvomusejari zvigadzirwa, uye
zvakare tiri kutsvaka chikwata chedu.
GOODAO @ 2017 KODZERO VOSE azotongwa
Foot Care Nama , Beautiful Gowns For Kids , CP Health Care zvemwoyo Set-Up Pack , Kids White Disposable Coveralls , Kids Disposable Coveralls , Kids Disposable Lab majasi ,